Izindaba - Amasondo Endebe Yokugaya Idayimane Ephindwe Kabili
Amasondo Endebe Yokugaya Idayimane Ephindwe Kabili
Uma kufika isondo lokugaya likakhonkolo, ungase ucabange isondo lenkomishi ye-turbo, isondo lenkomishi yomcibisholo, isondo lenkomishi yomugqa owodwa nokunye, namuhla sizokwethula isondo lenkomishi yomugqa okabili, ingenye yamasondo enkomishi yedayimane asebenza kahle kakhulu okugaya ukhonkolo phansi. Ngokuvamile osayizi abavamile esibaklamayo bangu-4″, 5″, 7″, amagrits 6#~300# ayakhethwa, amasegimenti ukuphakama ngu-5mm, senza ngendlela oyifisayo isisekelo sebhondi ezintweni zakho zokugaya. Izixhumi ezijwayelekile ze-arbor zingu-22.23mm, M14, 5/8″-11.
Ngokulandelayo, sicela ubone izici eziningi zesondo lenkomishi yemigqa emibili njengoba ngezansi:
Kulula ukusebenza: amasondo okugaya idayimane kulula ukusebenza nokufaka, afanele ama-grinders nama-angle grinders; Sicela ulandele imiyalelo yokusebenzisa ama-engeli grinders kanye nama-grinders ngesikhathi sokusetshenziswa ukuze ugweme izingozi
Ukusebenza kahle kwesihlabathi esisheshayo: ekuphakameni okungu-5 mm, ifeni yemigqa emibili eboshiwe yenzelwe ukugaya okusheshayo nokushelelayo, kungakhathaliseki ukuthi ukusetshenziswa okumanzi noma okomile, isondo ledayimane elinomklamo wezimbobo zomoya lingasiza ukugcina nokupholisa iphethini yokusika ukuze kuncishiswe ukuguga. , ukuthuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi
Kusetshenziswa kabanzi: lawa masondo okugaya ngaphakathi afanele izinhlobo ezahlukene zamatshe, angafakwa ekugayeni okomile noma okumanzi kukakhonkolo, igwadle, imabula, ithayela le-ceramic, amatshe omatshe nezinye izinto zokwakha, ukushelela indawo engalingani nokususa ukukhanya.
Iqinile futhi iqinile: yenziwe ngomzimba wensimbi ephethwe ukushisa kanye nokugcwala okuphezulu kwedayimane, lawa masondo okugaya inkomishi yedayimane anokugqwala futhi amelana nokugqwala, akulula ukuwohloka, asusa izinto ezisetshenziswayo ngokushesha.
I-High Diamond concentration yempilo ende kanye nokususwa kwezinto ezinolaka
Idizayini yamasegimenti amaningi kunamasondo enkomishi evamile ayivumela ukuthi ibe nempilo ende yokusebenza
I-Adopt dynamic balance technology yamasondo enkomishi, ukuze ikwazi ukugcina ibhalansi kanye igaya ngaphansi kwesimo sokuzungezisa ngesivinini esikhulu.
Izinhlobo ezahlukene zokuxhuma ziyatholakala ukuze zilingane ama-engeli ahlukene okugaya
Uma ungathanda ukwazi amanye amasondo enkomishi yedayimane, sicela ubheke iwebhusayithi yethu www.bontai-diamond.com.
Isikhathi sokuthumela: Oct-27-2021